Ukwakha isizwe ezinzima budlelwane Dating Zephondo Australia
Ukwakha isizwe ezinzima budlelwane ingaba imbono amawaka isifrentshi icacile ujonge kuba uthando ibali ukuba buhle kwaye lasting. Oko kusenokuba nzima kwaye enobunzima, nangona kunjalo, ukufumana ilungelo umntu: omnye abo baya ukwamkela bonke yakho iziphene abaya seduce kuwe yonke imihla kuba ubomi bakho bonke abo ufuna imali kangangoko ixesha njengoko usenza ukuze igcine togetherness kwaye uthando ukuba uphelelwe enjoying njengoko omtsha ezimbalwa. Ukwenza ezinzima budlelwane kwenzelwa inyathelo lesi-yi-ngena, nge-dash zempembelelo kwaye elungileyo dose ka-zimvo.
Ukwakha ezinzima budlelwane, ezithile kubalulekile amanyathelo ezifunekayo. Ixesha yokuba omnye ukuba precedes omtsha budlelwane oninika ithuba funda okungakumbi malunga ngokwakho. Ufuna ngokwenene ukwazi kufuneka ukuze ndonwabe? Ukuba unayo zahlukane, zibuze into ofuna ukususela kwixesha elizayo ezinzima budlelwane. Cinga ntoni uvakalelo elidlulileyo budlelwane kuwe ayisasebenzi ufuna ukuva kwixesha elizayo, ezifana jealousy okanye nokungabikho ukukholosa.
Ukwakha isizwe ezinzima budlelwane ifuna ukuba zibuze ilungelo imibuzo
Ixesha ngexesha apho ufumana ukwazi yakho kwixesha elizayo iqabane lakho kanjalo ezilungileyo ixesha kuba personal nokuhlola. Ngoku lixesha ukuphalaza ukukhanya kwi nokusilela yakho yangaphambili budlelwane kwaye yenze isigqibo malunga nkqubo ukuze ube umgwebi ibe ibaluleke kakhulu, ukuqinisekisa ukuba oku entsha romance efumana ngaphandle ukuya kakhulu eyona qala. Ufuna ukuphila a uthando olugqibeleleyo ibali, unoxanduva demanding malunga indlela yokukhetha ukukhetha i-iqabane lakho lona eqhelekileyo. Ukuba wathi, olugqibeleleyo indoda okanye umfazi ayikho kwaye ukwazi oku, kufuneka zibe ngaphezulu forgiving malunga ezithile amanqaku kwaye ngaphezulu flexible kwi abanye. Eli lixesha elihle ukwenza encinane uluhlu, apho ngaba umisela phantsi hayi kuphela ngokwemfuneko iimfuno kuba elizayo iqabane lakho, kodwa kanjalo eyodwa okkt. Umzekelo, ube ujonge kuba umntu othe akukho abantwana kwaye abo ubomi babo emzantsi Afrika ka-France. Yokuba nguye childless abe i-kubalulekile incopho kuwe, kodwa apho lowo ubomi ngu into ngu-vula ukutshintsha kwaye kokukhona flexible, okuthetha ukuba ungakwazi classify ngalendlela eyodwa. Ezi elula mna-assessment imisebenzi iza kuba ingakumbi aluncedo ngendlela ekuncedeni ukuseka i solid isiseko kuba elizayo ezinzima budlelwane. Ekubeni a vague umnqweno ukwakha lasting budlelwane ingaba kulungile, kodwa kubalulekile kakhulu ngcono ukwazi kakuhle njani kwaye, ideally, abo kunye. Ezi zigqibo uza luncedo ngexesha lokudala yakho advert kwiwebhusayithi yakho oyikhethileyo. Emva lokuqala uqhagamshelane kwaye ezimbalwa exchanges, uza qala ukuba ummangaliso ukuba ubudlelwane ubani ithuba babe ezinzima kwaye lasting.
Zibuze ukuba bazimisele ukwenza iinzame ukwakha obu budlelwane
Asingawo uthetha malunga zinika kwi ukuba yonke into yakho entsha iqabane lakho lifuna kodwa ngenye indlela yokucinga ukuqala adventure nge flexible attitude. Khumbula ukuba ubudlelwane lwenziwa ka-kuchitha kwaye kuthatha abanye ixesha ukulungela ngokugqibeleleyo kunye. Ngokunjalo ekubeni nako ukwenza compromises, kubalulekile ukukhumbula ukuba banike a budlelwane ixesha. Baninzi abathi kusilela, ngamanye amaxesha kakhulu kakhulu ngokukhawuleza, ukuhlala kunye njengendoda ezimbalwa xa mhlawumbi mabanikele ngokwabo ngakumbi chances ukuba kuvavanya ukuba ubudlelwane basenokuba ezenziwe umsebenzi. Ethabatha yakho iibheringi, ukuseka ukutshintsha kwemozulu of trust, ukwakha isiseko ka-complicity njengoko a ezimbalwa, ukufunda ukwazi konke malunga ngamnye ezinye kwaye discovering intimacy la ngamazwi onke amanyathelo ukuze kufuna umonde notyalo-mali. Kuthatha ukuza kuthi ga ngoku, ngaphezu ngosuku okanye ezimbini ukuqonda ukuba bobabini made ukuya kuhlala kunye. Amandla uthando kuphela uba apparent kwixesha elide elizayo ngenxa ‘xa uthando endures, wakhonza njengoko isiseko ubomi bakho’ (Udavide Leviathan)
← Dating for umtshato free
Kwi-Intanethi Incoko - Free Online Incoko →